काठमाडौँ, चैत १९ गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुले लकडाउनका कारण काममा निस्कन नपाउँदा बिहान बेलुका हातमुख जोर्न नसक्ने श्रमिक, मजदुर एवं विपन्न वर्गका लागि राहत वितरण शुरु गरेका छन् ।
राहत वितरण शुरु गरेसँगै मजदुर एवं विपन्न वर्गका नाममा गलामा तीन तोला सुनको सिक्री लगाउनेहरु पनि लाममा बसेको वडा नं. २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । मजदुर एवं विपन्न वर्गका मानिसको स्पष्ट परिभाषा र तथ्याङ्कसमेत नहुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । सम्पन्न मानिससमेत पाँच किलो चामल लिन लाममा बस्ने गरेका छन् ।
पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलसमेत पर्ने वडाका अधिकांश भाग सुनसान छन् । विदेशी पर्यटकलाई सरकारले नै स्वदेश फर्काउने नीति लिएपछि ठमेल क्षेत्र सुनसान भएको हो । यसैगरी नयाँबसपार्क क्षेत्रमा पनि लकडाउनको पालना सोचेभन्दा राम्रो भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी महानगरपालिका–६ ले चैत १७ गतेदेखि नै विपन्न वर्गलाई राहत वितरण गरेको छ । १७ गते ५०, १८ गते ९६ जना मजदुर वर्गलाई राहतस्वरुप चामल सात किलो, दाल दुई किलो, चिउरा दुई किलो, तेल एक लिटर, नून एक प्याकेटलगायत राहत सामग्री वितरण गरिएको वडाध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार लामाले सुनाउनुभयो ।
विपन्न वर्गलाई राहत वितरणका लागि संविधानसभाका सभासद् विमल केडिया, ॐ साई सङ्गठनलगायत दाताले सहयोग गरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ । दाताकै सहयोगमा आज २६० जनालाई राहत दिन लागिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । वडा नंं. ६ मा भने अहिलेसम्म मजदुर वर्ग नै राहतका लागि आइरहेको जनाइएको छ ।
राहत वितरणका लागि वडामा सुरक्षा निकायको समेत सहभागितामा सर्वदलीय समिति गठन गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । राहतको चामल लगी बेचेर रक्सी खानेका लागि भने वडाले कुम्भेश्वर महादेवस्थानमा निःशुल्क भोजन गराउन शुरु गरेको छ । यस्ता ५० जनालाई आज बिहानदेखि भोजन गराइएको अध्यक्ष सापकोटाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । आज लायन्स क्लबको सहयोगमा राहत बाँड्न लागिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी नून भने परिवारसङ्ख्या जति भए पनि एक किलो दिने महानगरपालिकाको नीति छ । यो नीति ३२ वटै वडामा लागू भएको छ । सहयोग गर्न चाहने सङ्घसंस्थालाई वडाको नेतृत्वमा एकद्वार प्रणालीबाट गर्न पनि महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ ।